Abaarso Tech School,Iftiinka Barri Ee Somaliland
Tuesday December 24, 2019 - 08:08:21 in Articles by Hadhwanaag News
Islaamka iyo aqoonta (Islamic and education) barashada cilmiga
waa mid diinteenu aad u dhiirigalinayso marka aad eegto aayadii ugu horaysay ee qur’aanka kariimka ee soo dagta waxay ahayd IQRA iyadoo suubanaheenii Maxamed SCW la farayey inuu noqdo mid wax akhriya, culumadu waxay sheegaan akhrintu inay tahay furaha aqoonta, waxaanay ahayd tusaale kaaga filan sida diinta islamku u dhiirigalinayso barashada cilmiga.
Nabiyulahi muusa CS waxaa la faray inuu raadiyo ninka isaga ka cilmiga badan oo ahaa nabi Khadar usafro si’uu cilmi usoo kororsado.
Xaga diinta lama helayo aayad ama xadiis diidaya barashada cilmiga diiniga ah iyo ka maadiga ahba waxaase ku arkeysaa bogaadin iyo dhiirogelin.
Alle markuu qisadii nabi Muuse iyo fircoon waxa uu tilmaamay markii juhaladii is kugu yimaadeen fagaaraha fircoon na saaxiriintiisii la yimid meesha ee alle amray in nabi Muuse tuuro ushiisa si ay ucunto masaskii sixiriintu tuureen juhaladii daawaneysay maanay fahmin mucjisada nabi Muuse watay, waxaase fahmay saxiriintii oo yidhi waxaanu rumaynay rabiga Muuse iyo haruun sidaa awgeed culumadu waxay tilmaameen sixirka maha in la barto sidaas oo ay tahayna waxa uu dhaamaa jahliga.
Jonathan Starr iyo dadka la shaqeeyaa waxa ay Somaliland galiyeen 27 million waxaanay dhiseen Abaarso technology iyo jamacada Barwaaqo oo dumarka ugooniya. waxqabadkaa muuqda iyo Dhaqaalahaa , waxaa inala gudboon inaanu ka faaideysano noqonana kuwa garab istaagga bogaadiyana.
Akhristow mala socotaa in Somaliland oo kamida dalalka ugu saboolsan calamka inay kashaqeyaan Chinese, Bangladesh, Kenyan iyo Indian. Waxaanay ka howl galaan shirkadaha isgaadhsiinta sida Somtel iyo Telesom.
Guntii iyo gebagabadii burburkii dowladii la isku odhan jiray Somali republic (Somaliland & Somalia) waxaa laga dhaxlay aafooyin badan waxaana kamida in awooda saxaafadda loo isticmaalo mid dhaqaalo lagu aruursado.
Waalidiin badan ayaa ubixiya dhaqaalo aad u faro badan si ubadkoodu uhelaan waxbarasho tayo leh geeyaan na hadba dalka ay u awoodaan dhaqalo ahaan sida India, Maleysia, Turkey iyo xitaa Ethiopia schoolka Abaarso iyo jaaamacada Barwaaqo ayaana inta loo baahdo ka aqoon iyo tayo sareyso ee alle haynaga dhigo kuwii garta malabka dushooda saaran.